Danjire Afey oo amaanay qaabka dowladda Soomaaliya u martigelisay shirkii IGAD – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wakiilka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Danjire Maxamed Cabdi Afey ayaa ka hadlay shirka wasiirada arrimaha dibada ee IGAD ee shalay ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Danjire Afey ayaa amaanay sida dowladda federaalka Soomaaliya u martigeliyeen shirkaas iyagoo qaatay kaalinta ugu horaysa ee qaban qaabada shirkada wasiirada IGAD.
Qodobada shirka ka soo baxay ayuu Afey ku sheegay in ay ugu muhiimsan tahay hirgelinta nidaamka federaalka oo gobolo Soomaaliya aan weli laga hirgelin, qalabaynta ciidamada dowladda federaalka iyagoo lala mideynaya kuwa maamulada ka jira dalka.
Waxaa uu sidoo kale danjiraha ka hadlay dhismaha maamulka KMG ee Gobolada Dhexe oo uu sheegay in uu kulan la qaatay guddiga farsamada maamul u samaynta gobolada Galgaduud iyo Mudug ayna isla qateen sida ugu haboon in loogu dhiso maamul ka mid ah dowladda federaalka oo ay shacabkuna ka qayb qaataan.
Maxamed Cabdi Afey waxa uu xaqiijiyey in magaalada Muqdisho sanadkan 2015 lagu qabandoono shir weynaha Urur Goboleedka IGAD kaasoo uu sheegay in uu noqonayo mid looga hadlo arrimaha dalalka IGAD.
Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD ayaa shalay shirkii u horeeyay muddo 28 sano ku yeeshay magaalada Muqdisho, iyadoo dowladda Federaalka Soomaaliya diyaar garow xoogan u gashay sidii Amniga u xaqiijin laheyd.